> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata PowerPoint (PPT) na MPEG Video
Mkpa iji tọghata PowerPoint ka MPEG video? Ndị niile ike PowerPoint n'ihu zọpụta na kọmputa gị ga-uru mma echebekwa na-ekere òkè. M nwere ikwu na converting PowerPoint ka MPEG Video bụ ezi echiche. Ị nwere ike-egwu MPEG video na ngwaọrụ na na gị PC; edit na Windows Movie Onye kere, ma ọ bụ ọbụna ọkụ nke video ka CD ma ọ bụ DVD.There bụ ọ nweghị ndakọrịta okwu maka MPEG usoro. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-enye gị ihe ọmụma bara uru maka na-agbanwe agbanwe PowerPoint ka MPEG Video.
Ka eme ụfọdụ Prep ọrụ. Mbụ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ikpokọta ọtụtụ PPT faịlụ n'ime otu video, ị ga-mara ọdịnaya nke ọ bụla PPT ma ọ bụ nanị mara na iji. Nke abụọ, na-na ngwa, Wondershare PPT2Video Pro. Wondershare PPT2Video Pro Eme ezigbo ọrụ ná converting PPT ka videos. Pịa a Free Download njikọ iji nweta ya.
N'oge akakabarede, ị nwere ike nne Mmetụta Launch Wondershare PPT2Video Pro ugbu a ma ọ bụ abụọ-pịa desktọọpụ icon ẹkedori ya. Mgbe ahụ, pịa Mepụta Video Files.
2 Import PPT ka PowerPoint ka MPEG Ntụgharị
Pịa Tinye na-agagharị na PowerPoint faịlụ na mpaghara ike mbanye, mgbe ahụ, gbakwunye na ngwa. Ebe i nwere ike tinye ọtụtụ PPTs dị ka ị jikota na a video. Ka ndokwa na iji, ikpuru faịlụ na ala.
3 Họrọ mmepụta format
Na ntọala window, họrọ mmepụta Video Format si Format ndọpụta ndepụta. N'ihi na .mpg bụ faịlụ ndọtị nke MPEG-1 na MPEG-2, otú i nwere ike ma na-ahọrọ MPEG-1 ma ọ bụ MPEG-2 ka mmepụta usoro. Ọtụtụ ndị ọzọ na ngwaọrụ na-preset dị ka mmepụta formats dị ka mma.
4 tọghata PPT ka MPEG
Ugbu a, na Export mkparịta ụka igbe, setịpụrụ a ụzọ ịzọpụta lekwasịrị MPEG video. Mgbe ị dị njikere, see tọghata bọtịnụ rụchaa dum ọrụ. Na dị nnọọ a nkeji, ị pụrụ ịchọta video na ebe nchekwa. Ugbu a ị na-niile mere!
BDMV Ntụgharị: Olee otú iji tọghata BDMV ka AVI, MP4, MOV (QuickTime) wdg
Olee otú bulite WMV ka YouTube effortlessly
Olee otú Jikọọ / Ikpokọta / jikota MKV Files na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Olee otú Record YouTube on Mac